Ụgbọ elu ụgbọ elu si na Nur-Sultan na London Heathrow maliteghachi na Air Astana
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ụgbọ elu si na Nur-Sultan na London Heathrow maliteghachi na Air Astana
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
A ga-eji ụgbọ elu Airbus A321LR kacha ọhụrụ rụọ ọrụ, oge ụgbọ elu ga-abụ awa 7 na nkeji 15 ga-apụ London na awa 6 na nkeji 30 na nloghachi Nur-Sultan.
Air Astana maliteghachi ụgbọ elu si Kazakhstan na UK.
Air Astana na -arụ Airbus A321LR n'okporo ụzọ London.
Ụzọ London ga -arụ ọrụ na Satọde na Wednesde.
Air Astana na-amaliteghachi ụgbọ elu na-aga kpọmkwem site na isi obodo Kazakhstan Nur-Sultan na London Heathrow na 18 Septemba 2021, na mbụ nwere ugboro abụọ kwa izu na Satọde na Wednesde.
A chọrọ ka ndị njem na-aga Kazakhstan gosipụta nnwale COVID-19 na-adịghị mma were awa 72 tupu ha abanye na mba ahụ.
Ọdụ ụgbọ elu Nursultan Nazarbayev bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na mpaghara Akmola, Kazakhstan. Ọ bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa niile na-eje ozi Nur-Sultan, isi obodo Kazakhstan.
Ọdụ ụgbọ elu Heathrow, nke a na -akpọbu ọdụ ụgbọ elu London ruo 1966 nke a na -akpọzi London Heathrow, bụ nnukwu ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na London, England. Ọ bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu mba ụwa isii na -eje ozi mpaghara London. Ebe ọdụ ụgbọ elu bụ nke Heathrow Airport Holdings nwere ma na -arụ ya.